Yehowa Nyankopɔn na Ɔdɔɔ Yɛn Kan—Adeyɛ a Ɛsen Biara a Efi Ɔdɔ Mu | Bɛn Yehowa
“Ɔno na Ɔdɔɔ Yɛn Kan”
1-3. Dɛn ne nneɛma bi a ɛmaa Yesu wu no yɛɛ soronko wɔ owu foforo biara a asi wɔ abakɔsɛm mu ho?
FEFƐW bere mu da bi, bɛyɛ mfirihyia 2,000 a atwam ni no, wodii ɔbarima bi a ne ho nni asɛm no asɛm buu no fɔ wɔ bɔne a ɔnyɛe ho, na afei wɔyɛɛ no ayayade kum no. Na ɛnyɛ ɛno ne atirimɔdenne ne okum a ɛnteɛ a edi kan wɔ abakɔsɛm mu; awerɛhosɛm ne sɛ, saa ara nso na ɛnyɛ ɛno ne nea edi akyiri. Nanso, na saa owu no yɛ soronko koraa.
2 Bere a saa ɔbarima no huu amane wɔ ne nnɔnhwerew a edi akyiri a na emu yɛ yaw mu no, ɔsoro ankasa dii hia a na asɛm no hia no ho adanse. Ɛwom sɛ na ɛyɛ owigyinae de, nanso esum duruu asase so mpofirim. Sɛnea abakɔsɛm kyerɛwfo bi kaa no no, “owia duruu sum.” (Luka 23:44, 45) Afei, aka kakra ma ɔbarima no agu n’ahome a etwa to no, ɔkaa asɛm yi a werɛ remfi da no: “Wɔawie!” Nokwarem no, ɔnam ne nkwa a ɔde too hɔ so yɛɛ biribi a ɛyɛ nwonwa. N’afɔrebɔ no ne ɔdɔ a ɛsen biara a onipa bi ada no adi pɛn.—Yohane 15:13; 19:30.
3 Nokwarem no, saa ɔbarima no ne Yesu Kristo. Wonim n’amanehunu ne owu a owui saa da bɔne, Nisan 14, 33 Y.B. no ho nsɛm yiye. Nanso, wɔtaa bu ani gu nokwasɛm bi a ɛho hia so. Ɛwom sɛ Yesu huu amane kɛse de, nanso obi foforo huu amane sen saa. Nokwarem no, obi foforo bɔɔ afɔre a ɛsen ɛno saa da no—adeyɛ a ɛsen biara a efi ɔdɔ mu a amansan yi muni biara nyɛɛ bi pɛn. Ɛyɛ adeyɛ bɛn? Mmuae no de yɛn kɔ nsɛmpɔw a ɛho hia no mu nea ɛsen biara so: Yehowa dɔ.
Adeyɛ a Ɛsen Biara a Efi Ɔdɔ Mu
4. Ɔkwan bɛn so na Romani sraani bi behui sɛ na Yesu nyɛ onipa hunu bi, na dɛn na saa sraani no kae?
4 Esum a edurui wɔ Yesu wu akyi ne asasewosow a emu yɛ den a edii so no nyinaa maa Romafo asraafo ha so panyin a ɔhwɛɛ Yesu kum so no ho dwiriw no. Ɔkae sɛ: “Ampa ara Onyame [Onyankopɔn, NW] ba ni!” (Mateo 27:54) Ɛda adi pefee sɛ, na Yesu nyɛ onipa hunu bi. Ná saa sraani no aboa ma wɔakum Ɔsorosoroni Nyankopɔn no Ba a ɔwoo no koro no! Ná Ɔba yi som bo ma N’agya dɛn?
5. Ɔkwan bɛn so na yɛbɛkyerɛkyerɛ bere tenteenten a Yehowa ne ne Ba no trae wɔ soro no mu?
5 Bible frɛ Yesu “abɔde nyinaa abakan.” (Kolosefo 1:15) Wo de susuw ho hwɛ—na Yehowa Ba no wɔ hɔ ansa na amansan a aniwa hu yi reba. Ɛnde, bere tenten ahe na na Agya no ne Ɔba no abom atra? Nyansahufo bi bu akontaa sɛ amansan yi adi mfirihyia ɔpepepem 13. So wubetumi abu bere a ɛte saa ho akontaa? Nea ɛbɛboa nnipa ma wɔate mfirihyia dodow a amansan yi adi ase sɛnea nyansahufo bu ho akontaa no, wɔayɛ bere ho akontaabu pon bi a ne tenten yɛ mita 110 wɔ okyinnsoromma mfonini bi anim. Bere a ahɔho nam saa akontaabu pon no ho no, anammɔn biara a wotu no gyina hɔ ma bɛyɛ mfirihyia a amansan yi adi no mu mfe ɔpepem 75. Wɔ bere ho akontaabu pon no awiei no, wɔde agyiraehyɛde bi a ne kɛse te sɛ ti nhwi na agyina hɔ ama bere tenten a adesamma de atra ase nyinaa! Nanso, sɛ akontaabu yi yɛ nokware mpo a, saa bere ho akontaabu pon no nyinaa rennu Yehowa Ba no nkwa nna! Dɛn na na ɔreyɛ wɔ saa mfe no nyinaa mu?
6. (a) Dwuma bɛn na na Yehowa Ba no di wɔ asetra a na ɔwom ansa na ɔrebɛyɛ ɔdesani no mu? (b) Abusuabɔ bɛn na ɛda Yehowa ne ne Ba no ntam?
6 Ɔba no de anigye som N’agya sɛ ‘odwumayɛni a waben.’ (Mmebusɛm 8:30) Bible ka sɛ: “Wɔankwati [Ɔba] no anyɛ biribiara a wɔyɛe.” (Yohane 1:3) Enti Yehowa ne ne Ba no boom yɛɛ adwuma de yɛɛ nneɛma foforo nyinaa. Hwɛ anigye ara a wonyae! Yegye di sɛ nnipa pii begye atom sɛ ɔdɔ a ɛwɔ ɔwofo ne ɔba ntam no mu yɛ den yiye. Na ɔdɔ ‘ne pɛyɛ hama no.’ (Kolosefo 3:14) Ɛnde, yɛn mu hena na obetumi ahu sɛnea ɔdɔ a atra hɔ bere tenteenten saa no mu den te? Ɛda adi pefee sɛ, ɔdɔ a emu yɛ den sen biara na ama Yehowa Nyankopɔn ne ne Ba no ayɛ biako.
7. Bere a wɔbɔɔ Yesu asu no, ɔkwan bɛn so na Yehowa daa ne nkate adi wɔ ne Ba no ho?
7 Nanso, Agya no somaa ne Ba no baa asase so ma wɔwoo no sɛ onipa ba. Saa a ɔyɛe no kyerɛe sɛ, na ɛsɛ sɛ Yehowa hwere abusuabɔ a ɔne ne Dɔba no nya wɔ soro no. Ɔde anigye a emu yɛ den fi soro hwɛe bere a Yesu nyin bɛyɛɛ onipa a ɔyɛ pɛ no. Bere a Yesu dii bɛyɛ mfirihyia 30 no, wɔbɔɔ no asu. Ɛnsɛ sɛ yɛbɔ yɛn tirim ka sɛnea Yehowa tee nka wɔ ne ho no ho biribi. Agya no ankasa fi soro kasae: “Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m’ani.” (Mateo 3:17) Bere a Yesu Agya hui sɛ ofi nokwaredi mu adi biribiara a wɔhyɛɛ ho nkɔm, biribiara a wɔhwehwɛ fii ne hɔ, ho dwuma no, ɛbɛyɛ sɛ n’ani gyei yiye!—Yohane 5:36; 17:4.
8, 9. (a) Dɛn na wɔde yɛɛ Yesu wɔ Nisan 14, 33 Y.B. mu, na ɛkaa ne soro Agya dɛn? (b) Dɛn nti na Yehowa maa ne Ba no huu amane na owui?
8 Nanso, Yehowa tee nka dɛn wɔ Nisan 14, 33 Y.B.? Ɔtee nka dɛn bere a woyii Yesu mae, na afei basabasayɛfo kuw kyeree no anadwo no? Bere a Yesu nnamfo guan gyaa no na wobuu no atɛn ɔkwammɔne so no? Bere a wodii ne ho fɛw, tetee ntasu guu no so, na wɔbobɔɔ no akuturuku no? Bere a wɔkaa no mpire ma n’akyi tetewee sɛ ntamabamma no? Bere a wɔde nnadewa bobɔɔ ne nsam ne ne nan mu fam dua ho na wogyaw no ma ɔsɛn hɔ na nkurɔfo sopaa no no? Agya no tee nka dɛn bere a ne Dɔba no sũ frɛɛ no wɔ n’ahohia mu no? Yehowa tee nka dɛn bere a Yesu guu ahome a etwa to, a na ɛno ne bere a edi kan koraa fi bere a wɔbɔɔ nneɛma nyinaa, a na ne Dɔba no nni nkwa mu no?—Mateo 26:14-16, 46, 47, 56, 59, 67; 27:38-44, 46; Yohane 19:1.
‘Onyankopɔn de ne ba a ɔwoo no koro no mae’
9 Yentumi nkyerɛkyerɛ mu. Esiane sɛ Yehowa wɔ nkate nti, yentumi mfa nsɛm nkyerɛkyerɛ ɛyaw a odii wɔ ne Ba no wu ho no mu. Nea yebetumi akyerɛkyerɛ mu ne nea enti a Yehowa maa kwan maa eyi bae no. Dɛn nti na Agya no maa tebea a ɛte saa baa no so? Yehowa da biribi a ɛyɛ anigye adi kyerɛ wɔ Yohane 3:16—Bible mu asɛm a wɔato din Asɛmpa ketewaa no. Ɛka sɛ: “Sɛnea Onyankopɔn dɔ wiase ni, sɛ ɔde ne ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ogye no di no anyera, na wanya daa nkwa.” Nea enti a Yehowa maa kwan no ne eyi: ɔdɔ. Yehowa akyɛde—ne Ba a ɔsomaa no ma obehuu amane wu maa yɛn—no ne adeyɛ a ɔdɔ wom sen biara a wɔada no adi pɛn.
Wɔakyerɛkyerɛ Onyankopɔn Dɔ Mu
10. Ahiade bɛn na nnipa wɔ, na dɛn na aba nea asɛmfua “ɔdɔ” kyerɛ so?
10 Dɛn na asɛmfua “ɔdɔ” yi kyerɛ? Wɔaka ɔdɔ ho asɛm sɛ ɛne nnipa ahiade a ɛsen biara. Efi awo mu kosi owu mu no, nnipa pere hwehwɛ ɔdɔ, wodi yiye wɔ ɔdɔ mu, na wodi ho awerɛhow, na sɛ wɔannya a, wowu wɔ ho mpo. Nanso, nea ɛyɛ nwonwa no, ɛyɛ den sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ mu. Nokwarem no, nnipa ka ɔdɔ ho asɛm kɛse. Wɔakyerɛw ɔdɔ ho nhoma, ato ho nnwom, aka ho anwensɛm pii. Ɛnyɛ bere nyinaa na ɛkyerɛkyerɛ ɔdɔ mu fann. Nokwarem no, wɔde asɛmfua no adi dwuma atra so ma ɛkame ayɛ sɛ nea ɛkyerɛ ankasa ayera.
11, 12. (a) Ɛhe na yebetumi asua ɔdɔ ho ade pii, na dɛn nti na ɛyɛ ɛhɔnom? (b) Ɔdɔ ahorow bɛn na na ɛwɔ tete Hela kasa mu, na asɛmfua a egyina hɔ ma ‘ɔdɔ’ bɛn na wɔtaa de di dwuma wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.) (d) Dɛn ne a·gaʹpe?
11 Nanso, Bible kyerɛkyerɛ ɔdɔ mu pefee. Expository Dictionary of New Testament Words a Vine yɛe ka sɛ: “Wɔnam nnwuma a ɔdɔ yɛ so nkutoo na ebetumi ahu.” Nneɛma a Yehowa ayɛ a ɛho nsɛm wɔ Bible mu no kyerɛkyerɛ yɛn ne dɔ ho ade kɛse—ɔdɔ kɛse a ɔwɔ ma n’abɔde. Sɛ nhwɛso no, dɛn na ebetumi ama saa su yi ada adi sen ɔdɔ kɛse a Yehowa ankasa daa no adi a yɛadi kan aka ho asɛm no? Wɔ ti a edidi hɔ mu no, yebehu Yehowa dɔ dwumadi ho nhwɛso foforo pii. Afei nso, yebetumi anya nhumu bi afi mfitiase nsɛm a egyina hɔ ma “ɔdɔ” a wɔde dii dwuma wɔ Bible mu no mu. Wɔ tete Hela kasa mu no, na nsɛmfua anan na egyina hɔ ma “ɔdɔ.” * Eyinom mu no, nea wɔtaa de di dwuma wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu ne a·gaʹpe. Bible nsɛm asekyerɛ nhoma bi frɛ eyi “asɛmfua a ɛsen biara a wobetumi de agyina hɔ ama ɔdɔ.” Dɛn ntia?
12 A·gaʹpe kyerɛ ɔdɔ a egyina nnyinasosɛm so. Enti ɛsen nea obi yɛ ho anigye a yɛkyerɛ ara kwa. Ɛyɛ nea ɛkɔ akyiri, ɛyɛ nea wɔhyɛ da susuw ho a ɛwɔ nnyinaso. Nea ɛsen ne nyinaa no, a·gaʹpe yam ye ankasa. Sɛ nhwɛso no, hwɛ Yohane 3:16 bio. Dɛn ne “wiase” a Onyankopɔn dɔe araa ma ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae no? Ɛyɛ adesamma a wɔwɔ wiase a wobetumi agye wɔn no. Nnipa pii a wɔnam akwammɔne so no ka ho. So Yehowa dɔ obiara sɛ n’adamfo, sɛnea ɔdɔɔ Abraham ɔnokwafo no? (Yakobo 2:23) Dabi, nanso, Yehowa fi ɔdɔ mu da ne papayɛ adi kyerɛ obiara, na ama wahwere ade kɛse mpo. Ɔpɛ sɛ obiara sakra, na ɔsesa n’akwan. (2 Petro 3:9) Nnipa pii yɛ saa. Ɔde anigye gye eyinom tom sɛ ne nnamfo.
13, 14. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ anigye taa wɔ a·gaʹpe mu?
13 Nanso, ebinom kura a·gaʹpe ho adwene a ɛnteɛ. Wosusuw sɛ ɛyɛ ɔdɔ a ɛwɔ adwenem a wɔnna no adi. Nokwasɛm ne sɛ a·gaʹpe taa kyerɛ afoforo ho anigye a wɔkyerɛ. Sɛ nhwɛso no, bere a Yohane kyerɛwee sɛ, “Agya no dɔ ɔba no,” ɔde asɛmfua a·gaʹpe na edii dwuma. So anigye nni saa ɔdɔ no mu? Hyɛ no nsow sɛ, Yesu kae sɛ: ‘Agya no ani gye Ɔba no ho,’ na wɔde asɛmfua phi·leʹo na edii dwuma. (Yohane 3:35; 5:20) Nea ɛtaa ka Yehowa dɔ ho ne ayamhyehye. Nanso, ne dɔ nnyina nkate so kɛkɛ. Ne nnyinasosɛm ahorow a nyansa wom na ɛteɛ no na ɛkyerɛ no kwan bere nyinaa.
14 Sɛnea yɛahu no, Yehowa su ahorow nyinaa hyia, ɛyɛ pɛ, na ɛyɛ anigye. Nanso, ɔdɔ na ɛyɛ anigye sen ne nyinaa. Biribiara nni hɔ a ɛtwe yɛn bɛn Yehowa kɛse sɛ ɛno. Nea ɛyɛ anigye no, ɔdɔ ne ne su titiriw. Yɛyɛ dɛn hu?
“Onyankopɔn Ne Dɔ”
15. Dɛn na Bible ka fa Yehowa su a ɛne ɔdɔ ho, na ɔkwan bɛn so na asɛm yi da nsow? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
15 Bible ka ɔdɔ ho asɛm ɔkwan bi so a ɛnka saa mfa Yehowa su atitiriw no biara ho saa da. Kyerɛwnsɛm no nka sɛ Onyankopɔn ne tumi anaa Onyankopɔn ne atɛntrenee anaa mpo Onyankopɔn ne nyansa. Ɔwɔ saa su ahorow no, ɔno ne saa su ahorow no wura, na ɔdɔ sen su abiɛsa no nyinaa. Nanso, wɔka biribi a emu dɔ paa fa su a ɛto so anan no ho: “Onyankopɔn ne dɔ.” * (1 Yohane 4:8) Ɛno kyerɛ dɛn?
16-18. (a) Dɛn nti na Bible ka sɛ “Onyankopɔn ne dɔ”? (b) Wɔ asase so abɔde nyinaa mu no, dɛn nti na onipa yɛ Yehowa su a ɛne ɔdɔ no ho sɛnkyerɛnne ma ɛfata?
16 “Onyankopɔn ne dɔ” nkyerɛ kɛkɛ sɛ “Onyankopɔn ne ɔdɔ yɛ pɛ.” Yentumi nnan asɛm no ani nka no sɛ “ɔdɔ yɛ Onyankopɔn” mma ɛnyɛ yiye. Yehowa sen su bi a aniwa ntumi nhu koraa. Ɔyɛ obi a ɔwɔ nkate, na ɔwɔ su ahorow pii ka ɔdɔ ho. Nanso, ɔdɔ ayɛ Yehowa ma. Ɛdefa saa nkyekyɛm yi ho no, nhoma bi ka sɛ: “Onyankopɔn su titiriw ne ɔdɔ.” Sɛnea ɛte no, yebetumi asusuw ho saa kwan yi so sɛ: Yehowa tumi ma otumi yɛ ade. N’atɛntrenee ne ne nyansa kyerɛ sɛnea ɔyɛ n’ade kwan. Nanso, Yehowa dɔ kanyan no ma ɔyɛ ade. Na ne dɔ ka sɛnea ɔde su afoforo di dwuma no ho bere nyinaa.
17 Wɔtaa ka sɛ Yehowa ne ɔdɔ ho nhwɛso. Enti, sɛ yɛpɛ sɛ yesua ɔdɔ a egyina nnyinasosɛm so ho ade a, ɛsɛ sɛ yesua Yehowa ho ade. Nanso, yebetumi ahu su a ɛyɛ fɛ yi wɔ nnipa mu nso. Na ɛyɛɛ dɛn na ɛbaa nnipa mu? Bere a wɔrebɔ ade no, ɛda adi sɛ Yehowa kaa saa nsɛm yi kyerɛɛ ne Ba no: ‘Ma yɛnyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛso.’ (Genesis 1:26) Abɔde a ɛwɔ asase so nyinaa mu no, mmarima ne mmea nkutoo na wotumi da ɔdɔ adi, na wɔnam saayɛ so suasua wɔn soro Agya no. Kae sɛ Yehowa de abɔde ahorow na ɛyɛɛ ne su atitiriw ho sɛnkyerɛnne. Nanso, Yehowa paw n’abɔde a ɛsen biara wɔ asase so, onipa, sɛ Ne su titiriw, ɔdɔ ho sɛnkyerɛnne.—Hesekiel 1:10.
18 Sɛ yɛda ɔdɔ a pɛsɛmenkominya nnim na ɛwɔ nnyinaso adi a, na yɛreda Yehowa su titiriw no adi. Ɛte sɛ nea ɔsomafo Yohane kyerɛwee no: “Yɛdɔ, efisɛ ɔno na ɔdɔɔ yɛn kan.” (1 Yohane 4:19) Nanso, akwan bɛn so na Yehowa dɔɔ yɛn kan?
Yehowa na Odii Kan
19. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ ɔdɔ dii dwuma titiriw wɔ Yehowa adebɔ nnwuma mu?
19 Ɔdɔ nyɛ ade foforo. Sɛ wohwɛ a, dɛn na ɛkaa Yehowa ma ofii ase bɔɔ ade? Ɛnyɛ sɛ na wayɛ ankonam a na ohia ayɔnkofa. Yehowa yɛ pɛ na ɔwɔ ne biribiara, onhia biribi a obi foforo betumi de ama no. Nanso ne dɔ, su a ɛyɛ nnam, na ɛkaa no ma onyaa ɔpɛ sɛ ɔne abɔde a wonim nyansa a wobetumi akyerɛ akyɛde a ɛte saa ho anisɔ bɛkyɛ anigye a ɛwɔ asetra mu. “Onyankopɔn abɔde mfiase” ne ne Ba a ɔwoo no koro no. (Adiyisɛm 3:14) Afei Yehowa maa Odwumayɛni a Waben yi yɛɛ nneɛma foforo nyinaa, na odii kan bɔɔ abɔfo. (Hiob 38:4, 7; Kolosefo 1:16) Bere a na saa ahonhom a wɔwɔ tumi yi wɔ ahofadi, nyansa, ne nkate ahorow no, wonyaa hokwan nyaa abusuabɔ a ɔdɔ wom—wɔne wɔn ho wɔn ho, na nea ɛsen ne nyinaa no, wɔne Yehowa Nyankopɔn. (2 Korintofo 3:17) Enti, wɔdaa ɔdɔ adi efisɛ wodii kan dɔɔ wɔn.
20, 21. Tebea bɛn mu na wɔde Adam ne Hawa kɔe a edi adanse sɛ na Yehowa dɔ wɔn, nanso ɔkwan bɛn so na wɔyɛɛ wɔn ade?
20 Saa ara na na adesamma nso te. Efi mfiase no, na Adam ne Hawa te ɔdɔ mu. Baabiara a na wɔbɛhwɛ wɔ wɔn Paradise fie no mu wɔ Eden no, na wotumi hu Agya no dɔ a ɔwɔ ma wɔn no ho biribi. Hyɛ nea Bible ka no nsow: “[Yehowa, NW] Nyankopɔn yɛɛ turo bi wɔ Eden a ɛwɔ apuei fam, na ɔde onipa a wɔnwenee no no traa hɔ.” (Genesis 2:8) So woakɔ turo bi a ɛyɛ fɛ mu anaa prama kɛse bi a ɛyɛ fɛ ankasa so pɛn? Dɛn na w’ani gyee ho kɛse? Hann a epue wɔ nhaban ntam wɔ beae a ɛhɔ yɛ kusuu no? Nhwiren a ɛwɔ nkofie so a ne kɔla gu ahorow fɛfɛɛfɛ no? Asuwa a ɛreworo so, nnomaa su, ne nkoekoemmoa dede a wɔyɛ no? Na nnua, nnuaba, ne nhwiren a afefɛw hua nso ɛ? Sɛnea ɛte biara no, prama kɛse biara nni hɔ nnɛ a yebetumi de atoto nea na ɛwɔ Eden no ho? Dɛn ntia?
21 Yehowa ankasa na ɔyɛɛ saa turo no! Ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ fɛ yiye. Ná dua biara a wɔhwɛ a ɛyɛ fɛ anaa aduaba a ɛyɛ dɛ wɔ so wɔ hɔ. Ná turo no nya nsu a ɛfata, na emu trɛw, na na mmoa ahorow a wɔn ho yɛ anika wom. Ná Adam ne Hawa wɔ biribiara a ɛbɛma wɔn asetra ayɛ anigye ne anika, na na wɔwɔ adwuma a abotɔyam wom ne abusua a edi mũ. Yehowa dii kan dɔɔ wɔn, na na anka ɛsɛ sɛ wɔdɔ no bi. Nanso, wɔanyɛ saa. Sɛ́ anka wobefi ɔdɔ mu atie wɔn soro Agya no, wofii pɛsɛmenkominya mu tew ne so atua.—Genesis, ti 2.
22. Ɔkwan bɛn so na sɛnea Yehowa yɛɛ ade wɔ Eden atuatew no ho no ma ɛdaa adi sɛ ne dɔ yɛ nokware dɔ?
22 Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɛno yɛɛ Yehowa yaw! Nanso, so saa atuatew yi maa abufuw hyɛɛ ne koma a ɔdɔ wom no ma? Dabi! “Oye, na n’adɔe [anaa, “ne nokware dɔ,” NW ase hɔ asɛm] wɔ hɔ daa.” (Dwom 136:1) Enti, ɔbɔɔ ne tirim ntɛm ara yɛɛ ɔdɔ nsiesiei ahorow a ɔnam so begye Adam ne Hawa asefo biara a wɔpɛ nkwa no. Sɛnea yɛahu no, na Agya no Dɔba no agyede afɔre a ɛma odii yaw kɛse no ka saa nsiesiei ahorow no ho.—1 Yohane 4:10.
23. Dɛn ne ade biako nti a Yehowa yɛ ‘anigye Nyankopɔn,’ na asɛmmisa a ɛho hia bɛn na yebesusuw ho wɔ ti a edi hɔ no mu?
23 Yiw, efi mfiase na Yehowa ada ɔdɔ adi akyerɛ adesamma. ‘Wadɔ yɛn kan’ wɔ akwan pii so. Ɔdɔ de biakoyɛ ne anigye ba, enti ɛnyɛ nwonwa sɛ wɔfrɛ Yehowa ‘anigye Nyankopɔn.’ (1 Timoteo 1:11) Nanso, asɛmmisa bi a ɛho hia sɔre. So Yehowa dɔ yɛn sɛ ankorankoro ankasa? Yɛbɛka ho asɛm wɔ ti a edi hɔ no mu.
^ nky. 11 Wɔtaa de adeyɛ asɛm phi·leʹo, a ɛkyerɛ “sɛ wubenya obi ho anigye, wubenya ne ho anika anaasɛ wobɛpɛ n’asɛm (sɛnea obi tumi te nka wɔ n’adamfo paa anaa ne nua ho) no” di dwuma wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu. Wɔde asɛmfua foforo, stor·geʹ, anaa abusua mu dɔ, dii dwuma wɔ 2 Timoteo 3:3 de kyerɛe sɛ saa ɔdɔ no bɛsa koraa wɔ nna a edi akyiri mu. Wɔmfa eʹros, ɔbarima ne ɔbea nna ho dɔ nni dwuma wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu, ɛwom sɛ wɔka ɔdɔ a ɛte saa ho asɛm wɔ Bible mu de.—Mmebusɛm 5:15-20.
^ nky. 15 Kyerɛw nsɛm afoforo mu nsɛm reyɛ ayɛ saa. Sɛ nhwɛso no, “Onyankopɔn yɛ hann,” ne “Nyankopɔn yɛ ogya.” (1 Yohane 1:5; Hebrifo 12:29) Nanso, ɛsɛ sɛ yɛte ase sɛ eyinom yɛ kasakoa, efisɛ ɛde Yehowa toto honam fam nneɛma ho. Yehowa te sɛ hann, efisɛ ɔyɛ kronkron, na ɔteɛ. “Esum” biara, anaa efĩ biara nni ne mu. Na yebetumi de no atoto ogya ho esiane ne tumi a ɛsɛe ade a ɔde di dwuma no nti.
Dwom 63:1-11 Ɛsɛ sɛ yebu Yehowa dɔ dɛn, na ahotoso bɛn na saa ɔdɔ no betumi ama yɛanya?
Hosea 11:1-4; 14:4-8 Akwan bɛn so na Yehowa daa ɔdɔ a ɛte sɛ agya de adi kyerɛɛ Israel (anaa, Efraim), a asoɔden bɛn a wɔyɛe mfa ho?
Mateo 5:43-48 Ɔkwan bɛn so na Yehowa da ɔdɔ a ɛte sɛ agya de adi kyerɛ adesamma nyinaa?
Yohane 17:15-26 Ɔkwan bɛn so na mpae a Yesu bɔ maa n’akyidifo no ma yenya awerɛhyem sɛ Yehowa dɔ yɛn?